Hydraulic Ag sịlịnda - Ningbo LD Machinery Co. Ltd
Hydraulic Ag sịlịnda
Hydraulic welded sịlịnda
Omenala Hydraulic sịlịnda
Hydraulic Kee Rod sịlịnda
Atụla anya; dị ala price bụ ezigbo ka ị na-ahụ. Anyị ga-ghọgbuo gị maka àgwà. All anyị haịdrọlik cylinders na-arụpụtara ka ISO: 9001 ụkpụrụ, nrụgide-anwale & ebu Standard 2-Year Akwụkwọ ikike., Na Door-to-Door ọrụ dị.
N'ihi na mmepe nke electronic technology, ugbu a, ị nwere ike inye anyị ase online. Anyị ga-aza gị na 5 awa, na ọ dịghị nsogbu n'ihi na oge ihe dị iche. Ozugbo ị na-ekpebi ihe ụdị cylinders ịzụta, mgbe ahụ anyị ga-enye gị na ọrụ maka ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ mbupu n'ime ụbọchị 20.
Anyị bụ kpọmkwem emeputa ke China na ihe karịrị afọ 30 akụkọ ihe mere eme. E nwere a dịgasị iche iche nke mụụrụ nha na strok ogologo maka ahịa na-ahọrọ, ka si isii ụdị haịdrọlik cylinders: welded sịlịnda na Clevis End, Clevis-Eriri End, tube End na Rod End; Kee-Rod sịlịnda na 2500PSI na 3000PSI. Dị mụụrụ nha mbio 1.5 sentimita 5 sentimita asatọ, stoke ogologo mbio 4 sentimita 48 sentimita asatọ. Anyị nwekwara ike iji na-emepụta NFPA na omenala cylinders maka ndị ahịa ndị nwere ihe pụrụ iche chọrọ.
LD Machinery Company Corporation nke Quality Management System na-gbaara ka ISO 9001: 2012